ဂျပန်လူမျိုးတွေအမြတ်တနိုးထားကြတဲ့ အရွယ်ရောက်သူများနေ့ - JAPO Japanese News
ဂါ 07 Jan 2020, 15:04 ညနေ
နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း ပထမဦးဆုံးလရဲ့ ဒုတိယမြောက်တနင်္လာနေ့မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အရွယ်ရောက်သူများအတွက် အခမ်းအနားဆိုပြီး ပွဲတော်တစ်ခုအနေနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြပါတယ်။ ကလေးဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ အမှတ်တရတွေကို ချန်ထားဖို့ အချို့သူများကလည်း အဖွဲ့လိုက်သောင်းကျန်းကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း နာမည်ကြီးတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကနေစပြီး လူကြီးဖြစ်သွားတာနဲ့ အရာအားလုံးက အေးဆေးဖြစ်သွားကြပေမဲ့၊ အဲ့လောက်ထိတော့ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးမလား…? အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကနေ “အရွယ်ရောက်သူများအခမ်းအနားကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပပေးရမှာလာ…?” လို့ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေလည်း ထွက်လာပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားဟာ ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းကနေ ဆင်းသက်လာသလဲ ဆိုတာကိုရော သိကြပြီးပြီလား….?
ရှေးအခါက ယောက်ျားလေးများအတွက်ဖြစ်တဲ့ 元服（げんぷく）Gennbuku ဆိုတဲ့ပွဲကနေ အစပြုခဲ့တယ်လို ပြောကြပါတယ်။
အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိ ကျင်းပပေးတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီပွဲမှာ ခေါင်းဆောင်းဦးထုပ်ပုံစံကိုလည်း ကလေးအရွယ်မှာဆောင်းခဲ့တဲ့ပုံစံကနေ လူကြီးဆောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဦးထုပ်ပုံစံပြောင်းပေးတာပဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံပြုမူပေးပါတော့တယ်။ လက်ထပ်တာလည်း လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သလို၊ ဆာမူရိုင်းမိသားစု၀င်တစ်ယောက် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ပွဲ၀င်ဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲမှာပဲ အသက်ကိုပေးပြီး တိုက်ပွဲ၀င်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊ ကတိသစ္စာ ပြုကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အရမ်းကို တန်ဖိုးထားကြတဲ့ အခမ်းအနားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားက ပုံမှန်အရပ်သားတွေအတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေနဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေအတွက် အဓိကထားပါတယ်။
မိန်းကလေးအခမ်းအနားဆိုလည်း မင်းမျိုးမင်းနွယ်တစ်စုအတွက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကလေးသဘာ၀ လိုက်ပြေးဆော့တဲ့အတွက် ခြေထောက်ပေါ်တဲ့အ၀တ်အစားပုံစံဖြစ်ပြီး၊ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မိန်ကလေးတွေဟာ ခြေထောက်ဖုံးတဲ့အထိ ၀တ်ဆင်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မိန်းကလေးတွေ အ၀တ်အစားပြောင်းတဲ့ပွဲကိုတော့ 裳着（もぎ）လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေလည်းပဲ အတူတူပါပဲ။ အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ် လောက်မှာ အရွယ်ရောက်တယ် လို့သတ်မှတ်ပြီး ချက်ချင်းလက်ထပ်ပေးကြပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အရွယ်ရောက်အခမ်းအနားနဲ့တော့မတူပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အခမ်းအနားပြီးတာနဲ့ ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် မည်သူမဆို မိမိရှိတဲ့နေရာကနေ တာ၀န်တွေကို အသီးသီးယူကြရတော့တာပါပဲ။
ရှေးခေတ်အခမ်းအနားကို နှစ်အစရဲ့ အစောဆုံးလပြည့်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၄၆ ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ 埼玉県蕨市（わらびし）Warabishi ဆိုသူက အဲ့ဒီအခမ်းအနားကို ၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ 青年祭 Youth festival အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာက တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပြီး၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အနေနဲ့လည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့ ပွဲကတော့ ဒေသအလိုက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေက ကျင်းပပေးကြပေမဲ့၊ ပြုလုပ်ပုံတွေကတော့ မတူကြပါဘူး။ ဥပမာ Disneyland ရှိတဲ့千葉県浦安市（うらやすし）Urayasu စီရင်စုမှာတော့ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေကို Disneyland အတွင်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးဟာ လှပတဲ့ ကီမိုနိုတွေ၀တ်ဆင်ကြပြီး Disneyland ကိုသွားကြပါတယ်။
ဒီနှစ်လည်းပဲ အသက် ၂၀ ပြည့်ခါစလူငယ်တွေအတွက် အရွယ်ရောက်အခမ်းအနားကိုကျင်းပပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာပေါက် သူတို့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနား ဖြစ်တဲ့အတွက် အနောက်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ အဲ့ဒီပွဲလေးမှာ ပါ၀င်စေချင်ပါတယ်…..။